Sodaani fi Egypt, akkasuma Ethiopia fi Ertirean Lola wal-irratti labsuuf qophaawaa jiran. – Kichuu
Pre/MNO Ob.Lammaa Magarsaa bakka dantaan Ethiopia tuqamtetti dantaa dhuunfaaf dubbachuu hin qabnu jechuudhaan tuffii warraaqsa ummata Oromoof qabu ibse.
Lola cimaatu Biyya Masrii fi biyya Sodaan akkasuma Ethiopia fi Ertirea jiddutti dhiheenyatti dhoohuuf jiraata jechuutuu bal’inaan dubbatamaa jira.
Maddii Sodaa kanaa Motummaan Sodaan biyya masriitu lafa Halaayibi fi Shilaatiin ja’amuun bekkamtu humna waraanaan dhunfatee narraa harka qaba jechuudhaan himannaa gola Motummota Gamtoomaniitti erga galfatteen boodatti Muddee 25/2017 Galana Diimaa irratti lafa Sawaakin ja’amuun bekkamtu waraana Turkiif kennuuf murteffachuu isiitu garmalee dubbicha hadheyse.
Motummaan Egypt fi Motummaan Emaraat/Dubai gama isaaniitiin oolanii osoo hin buliin waraanni Turkii Galaana Diimaa irra qubachuun kuni danta biyyoota kenyaati miidhaa jechuudhaan Motummaa Ertirea waliin waliif galtee mallatteysanii Mora Linjii waraana Ertirea “Saawaa” ja’amuun bekkamtutti waraana guddaa buufatan.
Waraanni guddaan Motummaan Egypti fi Motummaan Emaraat/Dubai biyya Ertirea keessa qubsiiftan kuni Motummaa Ethiopia fi Motummaa Sodaan biratti yaaddoo fi shakkii guddaa umuu irraan kan ka’een Pre/Sodaan Umer Al-Bashiir Mudde 28/2017 guutuu daangaa Ertirea fi Sudaan irratti keessattu aanaa Kasalaatti Emergency Status Kan labsee jiru tahuun ni hubatama.
Motummaan Ethiopia gara isiitiin waliif galtee waraanaa kan Motummaa Sodaan waliin qabdutti fayyadamuudhaan waraana isii gara magaalaa Kaslaatiin daangaa Ertirea fi Sodaan gubbaa kan qubsiiftee jirtu tahuu isii Gaazexaan Al-Arabii 21 ja’amuun bekkamu mormitoota Sodaan waabeyfachuun gabaasee jira.
Gama kaaniin Gaazexaan Sudan Tribune ja’amun bekkamu Sodaan Magaalaa Khartuum irraa Amajji 5/2018 akka gabaasetti Motummaan Ethiopia waraana isii dabalataan gara daangaa Ethiopia fi Ertirea irratti kan guuraa jirtu tahuu isii gabaasee jira.
Gaazexaan kuni gabaasa isaa itti dabaladhuudhaan Motummaan Ethiopia Sodaa waraana Masriitu haleellaa Ijaarsa laga Abbaay irratti gad-geessuuf deema jechuu irraan kan ka’een waraanaa fi meeshaa lolaa gurguddaa gara daangaatti kan sossoosaa jiran tahuu isaaniillee gaazexaan kuni dabalee addeyse.
Kanumaan wal-qabatee humna waraana Ethiopia fi Egypt wal-cinaa qabuudhaan gabaasa dhiheenya kana biyya Raashiyaatti maxxanfame tokko irraa akka hubachuun dandeyametti waraanni Egypt xaayyaarota lalaa 1300 fi Taankii lolaa kuma 8000 kan qaban tahuudhaafii akkasuma waraanaa lafaa nama milyoona tokko fi kuma dhibba sadii 1,300,000 kan qaban tahuu ibsee, gara Ethiopiatiin ammo Ethiopian Xayyaarota lolaa firii 80 fii Taankii lolaa firii 800 kan qabduufii waraana lafaa nama 160,000 kan qabdu tahuu isii odeessi biyya Raashiyaatti 2017 maxxanffame kuni mirkanessee jira.
Motummaan wayyaanee gama isitiin waraana Masrii fi Ertireatu daangaa Ethiopia cabsee nu weeraruuf deema jechuudhaan ummata biyyattii sossobaa jiraachuu irraan kan ka’een hidhamtoota siyaasaa Oromo fi kanneen biroo mana hidhaa Ma’akalaawii irraa gad-dhiifnee manicha Muziyamatti jijjirra jechuun dubbataa jirti.
Pre/Mootummaa Naannoo Oromiyaa Obbo Lammaa Magarsaa gama isaatiin E-TV wayta khaan dantaa ummata Oromotii morman jechuudhaan abaaraa ture irratti mul’atuudhaan ibsa amajjii 2/2018 kenne keysatti bakka dantaan Ethiopia tuqamtetti dantaa dhuunfaatiif wal-mormuun hin barbaachisu jechuudhaan warraaqsa Ummata Oromo tuffachuu bira kutee warraaqsa isaanii kana horofatti laaquuf yaaluun Obbo Lammaa Magarsaa kuni tuffii inni ummata Oromotiif qabu kan agarsiisu tahuu xinxaltoonni siyaasaa Oromo hedduun taajjabban.